GADZIMA IFOMU DESIGN → Diki Urban Architecture ☆ Metalco ☆ Bellitalia
GADZIMA YENYU DESIGN
GADZIMA YENYU DESIGN - isu tiri mumiriri akasarudzika pamusika wePoland wemakambani eItaly:
METALCO • Bellitalia • GADHARA DESIGN
Tinokumbira vese vanofarira mapato kuti vabatane dzimba dzekuvaka i vagadziri, zvakananga kwatiri kana kuburikidza Landscape Architecture Associationtiri nhengo inotsigira.
Tinokukokaiwo kumuzinda wedu mutsva unowanikwa mukati Warsaw at ul. Fort Służew 1b / 10 munhoroondo, yakasarudzika Fort 8.
Izvo pano kuti misangano nemisangano yevatinofambidzana navo uye vatengi nekubatanidzwa kwevakagadziri vedu veItaly vacharongeka.
Metalco - ikambani yeItaly yakavambwa mu1984.
Iyo kambani zvakare ndeyeboka iri Bellitalia i GADHARA DESIGN.
Iyo budiriro yekutengeserana kweMETALCO ndiyo mhedzisiro yekuenderera nekutsvagurudza uye ruzivo mumunda wekugadzira, kushandira pamwe nevanogadzira zvigadzirwa, uye zvekushandisa kwehunyanzvi hwekugadzira zvinhu uye zvigadzirwa.
Zvigadzirwa zveMETALCO zvinoratidzwa nemhando yemunhu uye magadzirirwo, ayo, pamwe chete nemhando yepamusoro, anovasiyanisa pamisika inotenderera pasirese. Zvese zvigadzirwa nekugadzira zvetekinoroji kunoitwa nekuremekedza nheyo dzechicology uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Tinokukumbira kuti ubatane.
Bellitalia ikambani yeItaly, chikamu cheboka reMETALCO, rakavambwa muna1962.
Inogadzira zvinhu zvekuvakwa kwemadhorobha kubva kumhando dzese kongiri, PDM, HPC, UHPC, granite uye marble akaunganidzwa ULTRATENSE CONCRETE.
Iyo inoshandurwa mbishi zvinhu zvinobvumira iwe kuti ugadzire chero fomu yesimba rakanyanya uye rakasimba.
Iyo inozivikanwa nekuda kwayo yakasarudzika miunganidzwa maruva mapoto i mabhenji, zvigaro zvine zvimisikidzo zvisina kujairika, zvinorema kupfuura matani mazana matatu nemazana uye chiumbwa chakajeka chegirini kana marble.
Zvinotengeswa zvinobudirira pasirese sezvigadzirwa zvakasarudzika nekuda kwepamberi kwetekinoroji maitiro uye dhizaini.
Dhizaini Yeguta ndiyo Italy kambani inosanganisirwa Metalco Boka pedyo neBELLITALIA.
Inopedzisa iyo yakakura kupa kwemakambani maviri ehanzvadzi.
Iyo ikambani yechidiki iyo yakaunganidzwa inogadzirwa nevadiki madhizaina anopa mazano matsva kumakosi avo, achive munyanzvi mukuru kune zvigadzirwa zvevakuru, vane ruzivo vanobatana navo kubva kuMetalco.
Zvigadzirwa zvaro zvinodhura zvakanyanya paunenge uchichengeta yakakura dhizaini, kunaka uye kusimba.